पाेखराकाे फेवाताल पुछारमा फोहरले बिजाेग बनाएकाे 'भाइरल' भएपछि.......... - Pokhara News
होमपेज-गण्डकी-पाेखराकाे फेवाताल पुछारमा फोहरले बिजाेग बनाएकाे ‘भाइरल’ भएपछि……….
पाेखराकाे फेवाताल पुछारमा फोहरले बिजाेग बनाएकाे ‘भाइरल’ भएपछि……….
पोखरा न्यूज । पोखराको फेवातालको पुछारमा थुप्रिएको फोहरले बिजाेग बनाएकाे तस्वीर सामाजिक संजाल फेसबुकमा भाइरल भएपछि त्यस ठाँउलाई मंगलबार सफा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अगाडि फोहर थुप्रिएर बिजोग अवस्था बनेको थियो ।
फेसवुकमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहका तस्वीरहरु पोष्ट गर्नुहुने चर्चित अभियन्ता भीम उपाध्यायले फोहरसहितको तस्वीर आइतबार पोष्ट गर्नुभएको थियो । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अगाडि कै खोलामा यस्तो बिजोग रहेछ।’- उहाँले पाेष्टमा लेख्नु भएकाे थियाे ।
सामाजिक संजालमा तस्वीर भाइरल भएपछि सरोकारवालाले फोहर सफा गर्न चासो देखाएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले मंगलबार फेवाताल सिरानदेखि बगेर मन्त्रालय गेटमा आएको फोहोर सफा गरिएको जानकारी दिनु भएको छ ।
फेवाताल पुछारको नहरमा रहेको फोहर सफा गरिएको तस्वीरहरु मन्त्री आचार्यले फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले फोहर सफा गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिनु भएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालिन उपाचारको खोजी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भएको छ ।